The Manager Windows Phone Device, iyadoo la kaashanayo kombiyuutar, waxaad ka caawinaysaa in maaraynta qalab Phone Windows. Waxaad samayn kartaa tallaabooyinka sida arkaysid, rakibidda, iyo uninstalling 'sideloaded' codsiyada, sahamin qalab, u hagaagsan ah, oo lagu wareejiyo faylasha kala duwan iwm
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira arrimo qaar ka mid ah in dadka isticmaala ee Windows Phone Device Manager wajiga waqti ka waqti. Gaar ahaan, dadka isticmaala kuwaas oo la casriyeeyay si Windows 10 dhawaan, kuwaas oo ay la soo gudboonaatay dhowr arrimood oo la OS Windows cusub iyo Maareeyaha Device Phone Windows. Khaladaad waxaa ka mid ah arrimaha la isku xirnaanta Wi-Fi, hartay ee Cortana, Settings iyo Start Menu iyo sidoo kale Taskbar ka.
Waxa xusid mudan, si ay u xaliyaan inta badan dhibaatooyinkan, waxaa jira oo kaliya qaar ka mid ah kaabidda aasaasiga ah in aad leedahay si ay u sameeyaan.
1. Computer ama Zune ma ogaan Windows Phone
2. Zune software fariisiyo markii ay taageerto kor u Windows Phone
3. Windows Phone 8 lama kala duwanaayeen aad PC
Marka aad qalab Phone Windows xidhmaan your computer Windows, your computer ogaan doonaan qalab si toos ah oo lagu rakibay software Zune aad toos doonaa.
Laakiin haddii aad ogaato in aad Windows Phone aan la ogaan kombiyuutarka ama waxaa laga yaabaa in codsigaaga Zune ma ogaan telefoonka ku xiran, ka dibna waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad isku daydo dhibaato qaar ka mid ah tallaabooyinka sida soo socda toogtay.
• Marka hore, baaraan in version aad ku rakiban ee Zune, waa nooca ugu dambeeya. Waxaa laga yaabaa inaad soo bixi version ah dambeeyay via jidkaa ama la casriyeeyo oo ag maraya in Zune Settings> Software> General> Hubi casriyeysan.
• Marka labaad, barkinta Phone qalab Windows ka kombiyuutarka iyo guuleysatey labadaba computer iyo Windows Phone. Marka sameeyo, xiriirkana usoo celiyaan qalabka Windows Phone ah iyo hubi in badala wax.
• Isku day inaad ka soo dekedaha kale USB iyo haddii ay tani caawin waydo, waxaa laga yaabaa inaad isticmaasho Manager Device in ay dhibta ka qalab aan la garaneyn ee kombiyuutarka.
Intaas ka dib, u furan Manager Device, guji icon computer xididka rukun ugu korraysa, buugga ka dibna dooro scan isbedelada hardware hoos menu Action ah.
Windows Phone waa in qoran qaybta ku tilmaamay sida kombuyuutarrada gacanta. Xaaladdan Windows Phone ahaa qaybiyay si qaldan, waxa laga yaabaa in ku qoran la calaamad la yaabka jaalaha ah (!) Iyo kombiyuutarada qaar ka mid ah, waxa lagu qori karaa "qalabka kale", sida "Device USB" ama "Device Lama yaqaan".
Si taas loo xaliyo, double-riix si aad Windows Phone dooro tab Darawalka, version saxda ah ee hadda jira ee darawalka in la geliyo waa in 4.7.965.0. Haddii ay dhacdo in Manager Device Windows muujinaysaa arrinta qalab ama haddii version darawalka ee Windows Phone in mar horeba la rakibay ma aha version hadda, aad leedahay si aad u cusboonaysiiso darawalka. Si tan loo sameeyo, K2410180B xasili, talaabooyinka soo socda:
• In uninstall tab darawalka la xusho.
• Haddii ay hidde u muujiyaan darawalka, waxa guji in ay doortaan Delete software darawalka aallada this ka dibna riix OK.
• Next, dooro computer icon xididka, ka dibna riix Scan isbedelada hardware on menu Action ah.
• Fur qalabka la qaadi karo, ka dibna double-riix si aad Windows Phone, dooro tab Darawalka.
• Hadda, guji Driver Update dibna caleenta aan computer u software darawalka.
• Riix Browse, hel Program Files / Zune ah / Drivers gal on your computer, ka dibna riix OK.
• Dooro soo socda marka ay keentay in, guji rakib.
• Ka dib markii la rakibey darawalka dhamaato, double click Close uga baxdo Manager Device ah. Haddii ay kuu soo baxdo in ay sidaa sameeyaan, computerka aad.
On fursad off in marka aad isku dayaya inuu u dhaadhaco oo aad Windows Phone 7, waxaad ka heli kartaa in barnaamijyada Zune ayaa iska joojiso jawaabayo, ka dibna waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay inaad hubiso iyo dammaanad in Device Updater Windows Mobile kor u socda oo waa.
• Waxaad u baahan doontaa in la gaarsiiyo Windows Mobile Device Updater (ZuneWmdu.dll) qayb ka mid ah barnaamijyada Zune in version 4.7.1407.0 ama qoraalkii ka dib.
• Waxaad kala soo bixi kartaa oo tudhi xidhmo Zune4.7_update ka KB2498092. Waa qoraal .compress taas oo ka kooban 32-bit iyo 64-yara kala duwanaansho labada barnaamijyada Zune ah.
• Ama waxaad kala soo bixi kartaa oo codsan Microsoft waxaa dayactir 50525 oo ha ku saxno aad u!
Hubi USB Connection
Haddii maamulaha Device ma kala saaro in aad telefoonka ku xiran, u badan tahay tani waa sabab ah in ay jiraan ururka jirka ma u dhexeeya dekedda USB ah fuushanaa telefoonka iyo dekedda USB kombuutarka ah. Sababaha hubaal waxaa ka mid ah:
• ma isticmaalka Waxaad macluumaad USB link u hagaagsan fiican ah, waxay la mid yihiin mid ka mid ah in la socda telefoonka daaqadaha. A telefoonada yar daaqadaha ayaa sidoo kale la siiyey gaadhsiis ah "amraya" links aan loo isticmaali karo in ay aasaasto ururka macluumaadka aad PC ah. Isku-dayga link kale, haddii hubaal.
• Waxaa jira boodh ama flotsam iyo jetsam in dekedda USB telefoonka daaqadaha. Qaado mindi ah isticmaalka weel hawada dulfuulan in ay nadiifiso dekedda USB ah telefoonka in la damaanad qaado ururka hufan.
• dekedda USB aad isticmaalka on PC waa wayn. Qaado toorey ah ku biirin leh dekedda USB kale ah. (Waxaa laga yaabaa inaad sidaas oo kale u qaataan mindi ah in PC kale ku biiro telefoonka. Tani waxay ansixin doontaa in arrinta la jiraa ururka USB ama ma).
Guuleysatey your computer iyo phone
Si aad uga bilowdo aad Windows phone, jaraa'id iyo hay badhanka Power ilaa aad ka aragto Slide ugu dhaadhacay inuu iska korontada, ka dibna rigoore hoos. Ka dib waxa ay off, ku soo lifaaq cable USB si ay u noqon on a. Haddii heshiis qeybtii labaad taasi uma shaqeeyo telefoonka daaqadaha, isku dayi mid ka mid ah xulashada socda:
• Press iyo hay badhanka Power iyo "hoos" marka ay keentay in. Ka dib waxa ay off, riix badhanka Power in ay soo jeedin ah ee aad taleefan mar kale ka.
• Haddii aad telefoonka ayaa batari badeli, waxa ka saar oo mar kale ka dib dakhso batteriga hoos guddiga dib aad telefoonka ee. Halkaa marka ay marayso in, riix badhanka Power in ay noqon saabsan telefoonka hal mar ka badan.
• Sida ugu dhakhsaha badan ee aad Windows Phone 8 ayaa u billaabeen, qaado ka dib markii kii ayaa qoray guulo ku guuleysatey in aad PC.
Hubi in aad telefoonka ayaa update software ugu dambeeyey
• Kaadhkaaga ka tagay liiska App ah.
• Settings Tubada iyo ka dib in hagaajinta tuubada Phone.
• Tubada Check u ah casriyaynta.
• Haddii casriyayn ah waa la heli karo, telefoonka ku tusi doonaa in aad ku waajib ah inay isticmaalaan update ah.
Sidee si ay kor aad Windows Phone 8 darawalka?
Haddii Manager Device Windows muujinayaa arrin qalab, ama haddii waxaana suura gal darawalka ee Windows Phone 8 in la soo bandhigo ma aha socon, cusboonaysiiso darawalka. Si tan loo sameeyo, qaadaana talaabooyinka soo socda:
• Isku aad Windows Phone in aad PC by isticmaalka link USB in waxa lagu daray aad telefoonka.
• Laga soo bilaabo screen Start, sort "Tababare Device," Settings tuubada, oo dabadeedna ka jaftaa Manager Device.
• suuqa kala A tusi doonaa magaca aad PC iyo Qormadaan waxaa ka mid ah waraaqaha.
(Haddii ay dhacdo in aadan arkin diiwaanka, magaca PC ka jaftaa.) Magaca aad Windows Phone 8 waajib ah in la diiwaan geliyo hoos Portable Qalabka. Haddii Phone Windows ahaa sax bandhigay, waxa laga yaabaa in diiwaan la calaamad la yaabka jaalaha ah. Dhinaca kale, laga yaabaa in la diiwaan hoos Qalabka kale ee sida qalab USB ah
• Laba-tuubada Windows Phone (hoos Qalabka la qaadan karo) ama qalabka dam ah in la furo suuqa kala Guryaha ah.
• On tab Darawalka, uninstall ka jaftaa.
• In sanduuqa Device Xaqiiji uninstall ah, dooro tirtirto barnaamijyada darawalka u qalab iyo ka dib OK tuubada in.
• noqo suuqa kala Manager qalabka. Tubada menu Action ah, oo ka dib markii tuubada in Sawirka isbedelada qalab.
• Qalabka la qaadan karo Open, kol in ka jaftaa magaca Windows Phone, iyo in dib markii jaftaa tab Darawalka.
• Ogow haddii aadan arkin magaca aad telefoonka ee, ka jaftaa qalabka dam ah oo la diiwaan hoos Qalabka kale, oo dabadeedna ka jaftaa tab Darawalka.
• Tubada Driver Update.
• Tubada Browse aan PC for software darawalka.
• Browse oo heli C ah: qabanqaabiyaha \_ Windows \_ Inf \_ aad kombuutarka, oo markaas dabadeed riix OK.
• Riix soo socda oo ay dhacdo in aad ka xanaajiyey, guji rakib. Laga yaabaa kaliya in la siiyo Close doorasho Waxaad. Ka dib markii la rakibey darawalka la dhammeeyo, xir daaqadaha furan ilaa aad ka tegaysaan Manager Device iyo computerka aad.
sida loo uninstall Windows Media Player gebi ahaanba?
Sidee loo Diiwaan PC Screen la taariikhqorihii PC Screen
> Resource > Windows > Common Windows Dhibaatooyinka Manager Device Phone iyo Solutions